IKhabhinethi yoMgcini weMidlalo eZivaleleyo epholileyo Kufuphi neBiggar
I-Gamekeeper's Cabin yipropathi ezivaleleyo ekulungeleyo ukutyelela i-Edinburgh, iGlasgow, iBorders, kunye neDumfries & Galloway. Xa ilanga likhanya ungayonwabela indawo yokuhlala yangaphandle yabucala. Ngaphandle koko, wonwabele umlilo kwaye ugcobe kwi-cosiness.
Indawo yethu yasemaphandleni ngaphandle nje kwedolophu yentengiso yembali yaseBiggar izisa ubumfihlo, iimbono ezimangalisayo, kunye nokuhamba okuhle okunje ngeCulter Fell okanye iTinto. Kukho indawo yokupaka (enofikelelo lwabakhubazekileyo) kwaye singacebisa ukuba uze nemoto. IBiggar yimizuzu eyi-15 yokuhamba.
Ibekwe ngaphakathi kweegadi ezithandekayo, ikhabhathi yethu epholileyo ikunika ikhaya elikude nekhaya apho sinethemba lokuba uya kukwazi ukuphumla kwaye wonwabe kuyo yonke indawo enokubonelela.
Idolophu ekufutshane yaseBiggar isingatha imisitho efana neBiggar Hogmanay Bonfire edumileyo, uMnyhadala oMncinci weBiggar, iVintage Car Rally, uMboniso wezoLimo, kunye nezinto ezinomtsalane ezihlala zihleli njengemyuziyam yethu, iqonga lemidlalo yeqonga, kunye negesi.
Izitshixo ziya kufumaneka ngebhokisi yesitshixo ekufikelelwa kuyo ngekhowudi esiza kukunika yona, ke nokuba asikho apho ukuze sikwazise kwiKhabhinethi, uya kukwazi ukungena!